Fanadinana bakalorea eto Antananarivo: nanomboka omaly ny adina fanatanjahantena | NewsMada
Fanadinana bakalorea eto Antananarivo: nanomboka omaly ny adina fanatanjahantena
Nilamina ny fanombohana ny adina fanatanjahantena bakalorea, omaly teto Antananarivo. Hitohy hatramin’ny 7 septambra izao izany fanadinana izany. Omaly, raha ny tetsy Mahamasina, 20 ireo tsy tonga niatrika ny fanadinana.
“Heverina ho tsy nahazo taratasy fiantsoana izy ireo noho ny mety ho tsy fandoavana ny saram-pianarana na nanadino ny daty”, hoy ireo mpampianatra. Nisy mpianatra telo kosa tsy afaka nanatanteraka adina fanatanjahantena noho ny tsy fahasalamana.
Nilaza ny tompon’andraikitra mampanao fanadinana fa tokony haka mialoha ny taratasy manamarina avy any amin’ny dokoteram-panjakana ny tsy fahafahana manao fampiasam-batana ilay mpianatra ka porofo iny entina amin’ny datin’ny fanadinana.
Ho an’ireo mpianatra, mila malina ka tokony hijery tsara ny ora sy ny daty hanaovana ny fanadinana ka tsy handiso izany, raha ny toromariky ny mpampianatra hatrany.
“Tokony hampiasa vatana manao fanomanan-tena 10 mn mialoha ny tena fanadinana mba tsy hanampoka ny vatana ka mety hahatorana ny mpiadina”, hoy ny toromariky ny mpampianatra. Mila tony koa fa tsy matahotra ary tanjona ny fahavitana ny adina fa tsy ny fahatongavana aloha manaraka ny tanjaky ny hafa. Rehefa avy mihazakazaka, tsy mijanona avy hatrany fa mandeha an-tongotra milamina hitohizan’ny fihazakazaky ny fitempon’ny fo hampilamina ny toe-batana.